Zoom App Khuphela ifowuni yeJio [Ukukhuphela kwangoko] | I-RoidHub
Blog ishishini ekhaya
»Ukukhuphela usetyenziso lwefowni yeJio [Ukukhuphela kwangoko]
Zoom App Khuphela ifowuni yeJio [Ukukhuphela kwangoko]
4.7 / 5 ( 34 iivoti )
Ukuhlala yedwa okanye hayi. Nokuba ngaba ubhubhane okanye ukungabikho kwayo. Ukufowuna ividiyo kuye kwaba yimfuneko. Ke ukuba ungumsebenzisi weFowuni yeJio, apha siza kuchaza indlela yokukhuphela i-App yeZoom kwiifowuni zeJio.
Ukuvuka kobhubhane, sihamba ngamaxesha angakhange abonwe. Ubomi buguqukele ezantsi. Inkululeko yokuhamba nokuhamba-hamba okwangoku ukuya kuthi ga ngoku iyinto entle.
Kwiimeko ezinjalo, akunakwenzeka ukuba uhlale kude nomsebenzi, ugcinwe kwikona yegumbi woyika ukusasazeka kwentsholongwane.
Kungenxa yeso sizathu le nto amashishini kunye neeofisi ziza nezinye iindlela zokwenza imisebenzi yazo iqhuba kakuhle nangokusemandleni. Kule meko, ukusetyenziswa kwenkomfa kunye nokusetyenziswa kwevidiyo kuyeyona ndlela iqhelekileyo yokusebenza, iintlanganiso kunye neengxoxo.
Ukuba usebenzisa ifowuni yaseJio eIndiya. Unokufumana ngokulula ukunxibelelana nabalingane bakho okanye abanye obathandayo ngokusebenzisa iividiyo zokusasaza ividiyo enjengeZoom App. Siza kukunika inkqubo kunye nemithombo ukuba uyifumane.
Zoom App Khuphela ifowuni yeJio: Uyenze njani?
Amanqaku eZoom App
Indlela yokukhuphela i-Zoom App yeJio Ifowuni
Uyenza njani i-Zoom App APK Ukhuphelo lweJio Ifowuni
Zoom App yeyeselfowuni kunye neePC. Unokukhuphela kwakhona kwaye ufake le sicelo kwifowuni yakho yeJio. Ukuyisebenzisa ungangena kwiintlanganiso kunye nabathathi-nxaxheba ukuya kutsho kwikhulu.
Ngesihlwele esinjalo ungayibona icrystal-ecacileyo, ekumgangatho ophezulu, ukujongana kobuso ngobuso, kwaye uthathe inxaxheba kuyo. Kwangelo xesha sabelana ngesikrini sakho kunye nokunxibelelana ngokusebenzisa imiyalezo nge-app kwangoko.
Inkqubo yokufumana umvuzo kwi-Zoom App kwifowuni yeJio ingasetyenziselwa iintlanganiso ze-Intanethi, ingqungquthela yevidiyo, kunye nemiyalezo yeqela kusetyenziswa esi sicelo esinye.
igama Sondeza intlanganiso yamafu
Igama lepakheji us.zoom
Iyafuneka i-Android 5.0 nangaphezulu
Esi sicelo sihle kakhulu kuzo zonke izicelo zohlobo lwaso. Ungonwabela ezi mpawu zilandelayo emva kokuba ukhuphelo lwe-App ye-Jio ifowuni igqityiwe.
Umgangatho wokwabelana kwesikrini ogqwesileyo
Yabelana ngescreen ngqo kwiJio smartphone yakho.
Imifanekiso ekwabelwana ngayo isikrini, iiwebhusayithi, iGoogle drive, iifayile zebhokisi, kunye nebhokisi yendawo esetyenziswa, okanye amanye amaxwebhu.
Thumela izicatshulwa ezininzi, imifanekiso, kunye neefayile zokumamela ngqo kwifowuni yakho yeJio ngefowuni.
Veza imeko yokufumaneka.
Unokumema abafowunelwa befowuni okanye abafowunelwa nge-imeyile.
Unokuthatha inxaxheba njengabaphulaphuli okanye njengesithethi esisebenzayo
Isebenza kulo lonke uqhagamshelo lweintanethi kubandakanya 3G / 4G okanye uqhagamshelo lwe-WiFi.
Kuya kufuneka unike ukufundwa kokulandelayo Sebenzisa inqaku elipheleleyo laBasebenzisi befowuni yeJIO.
Ukhuphelo lomlilo saSimahla kwifowuni yaseJio
Zimbini iindlela zokukhuphela usetyenziso. Enye ivela ngqo kwivenkile yokudlala kaGoogle kwaye enye injengefayile ye-APK enokufakwa kamva kwisoftware yeJio. Nantsi indlela yokukhuphela kwiGoogle Playstore.
Yiya kwiGoogle Play Store (Qhagamshela ekugqibeleni kwinqaku)
Khangela i-Zoom App ngokusebenzisa ibha yokukhangela ephezulu ephepheni.
Thepha okanye ucofe ukhetho lokufaka
Nje ukuba inkqubo igqityiwe, unokufumana i-icon yefowni yakho kwifowuni yeJio. Cofa nje ukuvula kwaye uqhagamshele kwangoko.
Oku kulula njengenkqubo yokufakwa ngokuthe ngqo. Apha kuya kufuneka uhambe ngamanyathelo ongezelelekileyo kwaye ufake usetyenziso ngesandla. Siza kuyichaza le nkqubo ngokulandelelana. Kuya kufuneka wenze ngokulandelelana amanani aboniswayo.
Inyathelo lokuqala kukukhuphela ifayile ye-APK. Ukuze ufumane oko, kuya kufuneka ucofe okanye ucofe iqhosha elithi 'Khuphela i-APK' apha ngezantsi.
Oku kuya kuqalisa inkqubo ngaphakathi kwithuba le-10-lesibini (kuxhomekeke kwisantya sakho se-intanethi).
Nje ukuba inkqubo igqityiwe, khangela ifayile ye-APK kulawulo lwakho lwesoftwe kwaye ucofe kuyo.
Apha ungaxelelwa ukuba wenze indlela yemithombo engaziwayo. Ungakwenza oko ukusuka kuseto lokhuseleko.
Emva koko ucofe amaxesha ambalwa, kwaye uya kuba sekupheleni kwenkqubo yokufakwa.
Oku kugqiba inkqubo yokufakwa. Ngoku ungasebenzisa i-Zoom yeefowuni zevidiyo kunye nonxibelelwano.
Ukukhutshelwa kokukhutshelwa kweefowuni zeJio kufuna amanyathelo alula ukuba awalandele Emva koko unokonwabela zonke iimpawu ezonwabisayo zee-app. Ukufumana i-Zoom APK ukucofa ikhonkco elingezantsi okanye ungaya ngqo kwiVenkile yeVenkile ngokuthepha ikhonkco lesibini.
Zoom App Khuphela ifowuni yeJio